▷ Reviews (*19*) Ashampoo WinOptimizer 19 | Raadaarka farsamada - 【 Isbarbardhigga】 2022
Faallooyin (*19*) Ashampoo WinOptimizer 19 | raadaarka farsamada
Kumbuyuutarro | 0 Comments
Ashampoo WinOptimizer 19 waa (*19*) qalab dayactir ah (*19*). Kumbuyuutarkaaga waxaa laga yaabaa inuu leeyahay habab badan oo gadaal ah oo socda (*19*) oo aadan ka warqabin oo hoos u dhigaya waxqabadkiisa. Waxaa laga yaabaa inaad ogaato hawlo kale oo aan faa'iido lahayn oo ay adagtahay (*19*) in la maareeyo. Ashampoo WinOptimizer 19 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si degdeg ah ula macaamisho oo aad hubiso in kombuyuutarku u shaqeeyo (*19*) sida ugu macquulsan.
Ashampoo WinOptimizer 19 waa mid ka mid ah (* 19*) adeegyo badan oo nidaam ah oo ay abuurtay shirkadda softiweerka ee Jarmalka (*19*) Ashampoo. Waxaan dib u eegi doonaa iyada oo ku saleysan (*19*) shuruudo gaar ah, oo ay ku jiraan qiimaha, sifooyinka, waafaqsanaanta, taageerada macaamiisha, iyo isticmaale (*19*)
Ashampoo WinOptimizer 19 waxaa lagu heli karaa lacag hal mar ah halkii (*19*) bishiiba aad iska qori lahayd (Sawirka (*19*) Credit: Ashampoo)
1 baakadaha iyo qiimaha
3 Isdhexgalka iyo isticmaalka
6 xukunka ugu dambeeya
baakadaha iyo qiimaha
Waxaad ku heli kartaa Ashampoo WinOptimizer 19 hal iibsi. Waxay ku kacaysaa €29.99 si aad u iibsato qaab la soo dajin karo. Haddii aad u baahan tahay qaabka (*19*) DVD, waxaad u baahan tahay inaad bixiso €12.95 dheeraad ah si laguugu soo dejiyo. Sidoo kale, waxaad ku bixin kartaa €4.95 taageerada iimaylka mudnaanta leh.
Ashampoo wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka cusboonaysiiso WinOptimizer (*19*) noocii hore oo aad ka dhigto kan ugu dambeeyay €14.99. Nooca ugu dambeeyay waa Ashampoo Winoptimizer 19.
Nooc bilaash ah (*19*) Ashampoo WinOptimizer sidoo kale waa la heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, shaqadeedu waa xaddidan tahay oo waxay ku habboon tahay oo kaliya in la tijaabiyo software ka hor (* 19*) samaynta go'aanka kama dambaysta ah (*19*) si loo iibsado.
Dhammaan (*19*) Ashampoo WinOptimizer 19 sifooyin waxaa gacanta ku haya qaybo kala duwan si loo nadiifiyo oo loo hagaajiyo kombuyutarkaaga (Sawirka (*19*) Credit: Ashampoo)
Ashampoo WinOptimizer 19 waxaa ku jira noocyo badan oo kala duwan (*19*) oo astaamo loogu talagalay in lagu dedejiyo waxqabadka (*19*) ee PC-gaaga hadda, oo ay ku jiraan:
ciyaarta (* 19*) xoojinta
Habkani waxa uu wanaajiyaa waxqabadka (*19*) ee ciyaaraha (*19*) PC gaaga. Waxay tan ku fulisaa iyadoo meesha ka saaraysa dhammaan adeegyada asalka ah ee aan la rabin hal gujin. Ciyaartoyda ayaa jeclaan lahaa sifadan.
Kumbuyuutarkaaga waxa laga yaabaa inuu lahaado xisaabo isticmaale oo badan (*19*). Ashampoo WinOptimizer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad disho hababka asalka ah ee hoos u dhigaya isku mar. Sifadan, uma baahnid inaad ka baxdo hal akoon oo aad gasho mid kale si aad ugu celiso (*19*) habka wanaajinta.
Ashampoo WinOptimizer wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku faaruqiso qashinka (*19*) ee kombuyutarkaaga hal mar.
Habkani waxa uu kuu ogolaanayaa in aad iskaan garbahaaga adag ee aan la rabin (*19*) faylal oo aad dumiso.
Habkani waxa uu kuu ogolaanayaa inaad sirayso ama aad furto faylal gaar ah. Waxay lagama maarmaan u tahay dadka ku shaqeeya dukumeenti xasaasi ah oo u baahan ammaan sare, tusaale ahaan, dhakhaatiirta, cilmi-nafsiga, macallimiinta.
Shaqadani waxay kuu ogolaanaysaa inaad falanqayso oo aad qiimayso waxqabadka (*19*) kombayutarkaga. Waxaad markaa is barbardhigi kartaa natiijooyinka (*19*) waxqabadka khadka tooska ah nidaamyada kombiyuutarada kale ee la midka ah kuwaaga. Sidan waxaad ku ogaan doontaa marka nidaamkaagu dib u dhaco oo uu u baahan yahay inuu hagaajiyo waxqabadka (*19*).
Boot Centre waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku hagaajiso kombuyutarkaaga si degdeg ah (*19*) waqtiyada bootinta. Boot tartiib tartiib ah ayaa aad u niyad jabsan dhammaan isticmaalayaasha (*19*) kombiyuutarada. Maxaa diidaya in laga saaro?
Waxaad u kala qaybin kartaa faylal waaweyn qaybo gaar ah si aad u wanaajiso waxqabadka iyo culeyska PC-gaaga (*19*) jeer.
Undeleter wuxuu kuu ogolaanayaa inaad dib u soo ceshato faylalka aad si lama filaan ah u tirtirtay.
Tilmaamahani waa uun cidhifka barafka iyo qaar kaloo badan oo la heli karo Ashampoo WinOptimizer 19.
Dhexdhexaad nadiif ah oo leh badhammo waaweyn ayaa fududeynaya in lagu dhex socdo Ashampoo WinOptimizer 19 (Sawirka (*19*) Credit: Ashampoo)
Isdhexgalka iyo isticmaalka
Ashampoo WinOptimizer 19 wuxuu leeyahay interface fudud. Si aad u isticmaasho, waa in aad marka hore ka soo dejisa software-ka (*19*) boggooda internetka, kaas oo fudud (*19*) in la sameeyo. (*19*) faylka rakibaadda wuu ka yar yahay (*19*) 50 MB. Fur faylka ka dib (*19*) soo deji si aad u bilowdo rakibidda. Waxaad u baahan doontaa furaha hawlgelinta (*19*) si aad u sii wadato, kaas oo aad ka heli karto iimaylka aad siiso Ashampoo marka aad isdiiwaangeliso. Geedi socodka oo dhan waa dhakhso oo fudud.
Waxaad socodsiin kartaa softiweerka kadib (*19*) rakibid. Waxay leedahay dashboard fudud oo fudud (*19*) si loogu isticmaalo badhamada muuqda ee hawlo kala duwan.
Ashampoo sidoo kale waxay haysataa tiro (*19*) tilmaame waxtar leh iyo casharro ku jira shabakadooda (Sawirka (*19*) Credit: Ashampoo)
Ashampoo WinOptimizer 19 wuxuu bixiyaa iimaylka, wada sheekaysiga tooska ah, iyo taageerada taleefanka. Si kastaba ha ahaatee, taageerada iimaylka guud ahaan waa mid aan jawaab lahayn. Waxaad ku bixin kartaa €4.95 qorshe laba sano ah (*19*) taageerada (*19*) iimaylka mudnaanta leh (*19*) si loo xalliyo dhibaatadan.
Intaa waxaa dheer, Ashampoo waxay leedahay bog internetka ah oo Su'aalaha Inta badan La Isweydiiyo (FAQ) (*19*) halkaas oo aad ku xallin karto dhibaatooyinka caadiga ah.
Waxaa jira dad badan oo (*19*) ku tartamaya Ashampoo WinOptimizer, sida CCleaner iyo Glary Utilities. Ashampoo waxay ku kacaysaa la mid ah tan CCleaner waxayna leedahay shaqo la mid ah. Si kastaba ha ahaatee, waxa kaliya oo laga heli karaa nidaamyada hawlgalka Windows, halka CCleaner uu ku habboon yahay Windows iyo Mac. Dhinaca kale, Glary Utilities waxay ku kacaysaa qiyaastii (*19*) € 20, oo aad uga jaban Ashampoo.
Ashampoo WinOptimizer waa qalab waxtar leh si loo hubiyo in kombuyuutarku ku socdo waxtarka ugu sarreeya. Waxay faa'iido u leedahay xirfadlayaasha u isticmaala kombuyuutarkooda si ay u qabtaan hawlaha CPU-degdegga ah (*19*), sida naqshadeynta iyo animation-ka-caawinta kombuyuutarka. Ciyaartoyda ayaa sidoo kale u isticmaali kara si ay u horumariyaan waxqabadka (*19*) ee kombayutarkooda.
Hal cilad ayaa ah in Ashampoo WinOptimizer 19 kaliya laga heli karo Windows. Waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan aragno wax la mid ah macOS.
Waxaan sidoo kale iftiiminay uninstaller-yaasha ugu fiican ee software bilaashka ah (*19*) iyo nidaamka ugu fiican ee utility iyo software dayactirka (*19*) ee kombuyuutarrada ganacsiga.